Miharihary ny fivarotan-tanindrazana : namidin’ny fanjakana ny tany “Arboretum” Ambatobe | NewsMada
Miharihary ny fivarotan-tanindrazana : namidin’ny fanjakana ny tany “Arboretum” Ambatobe
Nantsikafon’ny fandaharana “Alalino” ao amin’ny Kolo TV, afakomaly alina ny fivarotan-tanindrazana ataon’ny mpitondra. Mitohy ny fikapana ny ala sy ny famefena tamboho ny“Arboretum” etsy Ambatobe. Tanim-panjakana ahitana ireo karazana kininina sy “sapin” rehetra maniry eto amintsika izy io kanefa izao nopotehina hananganana fotodrafitrasa izao. Nilaza ho tsy mahalala izao raharaha izao ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny Ala, Ndahimananjara Johanita. Avy ao ihany anefa no mivoaka ny taratasy fahazoan-dalana hanapaka ny hazo ny volana desambra 2016. “Nahita sy nijery io tokoa ny mpiara- miasa ary nanakana izany fikapana ala izany. Efa nangataka tany amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany izahay hijery akaiky izany ary horaisin’ny fanjakana an-tanana io satria tsy azo atao ny mikapa ny ala sy ny manorina eo”, hoy izy ny volana janoary. Nivoaka tampoka indray anefa ny taratasy fanafoanana io fahazoan-dalana io ny janoary teo. Nanamafy ny tomponandraikitra eo anivon’ny ny minisitera misahana ny Tetikasan’ny filoham-pirenena fa efa mandeha ny fanadihadiana. “Tsy maintsy mijanona ho “espace vert” ny toerana. Anjarantsika ny manasazy…”, hoy ny minisitra Rafidimanana Narison. Na eo aza anefa izany, mitohy hatrany ny asa nataon’ilay orinasa nahazo ny tany. Anisan’izany ny fanapahana ny hazo, fananganana tamboho ary fantatra fa hananganana hotely fandraisam-bahiny ity toerana ity.
Etsy andaniny, nambaran’ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Ilafy, Andriamiharisoa Salema fa tsy mbola nisy fahazoan dalana nomen’izy ireo io orinasa io. “Ny antontan-taratasy rehetra ilaina efa an-dalana ary efa feno ho amin’ny fahazoan-dalana hanorina, saingy sakana ny eo amin’ny fepetra amin’ny fanapahana hazo satria raha mbola misy olana eo amin’ny tany tsy mbola mamoaka io fanomezan-dalana hanorina io izahay. Efa nahazo fahazoan-dalana hikapa hazo ihany ry zareo nefa avy eo nisy fanohanana indray… Tsy mbola afaka manome fahazoan-dalana amin’izany izahay”, hoy izy.
Malahelo tanteraka ny mponina
Fantatra ny volana janoary ihany koa anefa fa tsy vitan’ny minisitera intsony ny mitantana ny arboretum ka antony nanomezana ny tsy miankina izany. Tsy niandry ela taorian’izany. Nesorina tamin’ny toerany ny tale jeneralin’ny fananantany, Rasolomampionona Hasimpirenena. Efa nanambara ny fisokafan’ny fanadihadiana momba io arboretum io ny tenany. Nanaitra ny rehetra anefa ny fahitana fa nisolo ny toeran’io tale jeneraly io, Rasendrasoa Hanitra, nanasonia ny taratasy famaritana ny arboretum Ambatobe.
Malahelo ny tanteraka ny mponina. “Tamin’ny taona 1929 no namidy tamin’ny fanjakana io rehefa nangatahiny. Namidin’ny fanjakana anefa izany amin’izao fotoana izao. Nahoana no hamidy sy tapahina nefa tahirin-kazo mampiavaka antsika maneran-tany ny hita ao…”, hoy izy ireo. Tsy vitan’izany. Manana ny lanjany ho an’ny firenena ny fananana “Arboretum”. Manana ny ambarany momba izany ny manampahaizana. “Latsaky ny 10% amin’ny ala tany am-piandohana sisa tavela. Mahatonga ny olon-tsotra na fikambanana manangona ireo karazan-kazo ahina hanjavona satria tafahoatra ny fitrandrahana azy. Betsaka ny ala ahina hanjavona noho ny fanimbana azy ka mila ny toerana tahaka ny Arboretum”, hoy ny talen’ny Houston Zoo Madagascar, Ratsimbazafy Jonah. Nambaran’ny tompon’andraikitry ny sampandraharahan’ny ala, Andrianiaina Henri Jeferson koa fa tafiditra anatin’ny faritra arovana izy io ary natokana hambolena hazo sy anaovana fanandramana.
Araka izany, iza ny tomponandraikitra tamin’ny famarotana ny tany ? Iza ny namoaka ny fahazoan-dalana hikapa ny ala ? Iza avy koa ireo mpiray tsikombakomba amin’ny fanatanterahana izany rehetra izany ? Aiza ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fanasaziana ?